BUDDHIST TERMS' Dictionary: ELEMENT OF HEAT - တေဇောဓာတု
ELEMENT OF HEAT - တေဇောဓာတု
ELEMENT OF HEAT Tejodhᾱtu
တေဇောဓာတု - တေဇောဓာတ်၊ မီးဓာတ်၊ ပူမှု အေးမှုသဘော။
မီးသည် ပူမှုသဘောရှိသောကြောင့် ဥဏှတေဇောဓာတ် လွန်ကဲသောအရာဖြစ်သည်။
ရေခဲသည် အေးမှုသဘောရှိသောကြောင့် သီတ တေဇောဓာတ် လွန်ကဲသောအရာဖြစ်သည်။
Fire element; that which has the dual nature of heat and cold.
Fire has the nature of heat and is predominated by the element of heat, uṇhatejodhᾱtu.
Ice has the nature of cold and is predominated by the element of heat in its obverse state, sῑtatejodhᾱtu.